Nairobi : Kulan ku saabsan khilaafka Hawada oo dhexmaray Somaliland iyo Somalia | Berberanews.com
Home WARARKA Nairobi : Kulan ku saabsan khilaafka Hawada oo dhexmaray Somaliland iyo...
Nairobi : Kulan ku saabsan khilaafka Hawada oo dhexmaray Somaliland iyo Somalia
Hargeysa(Berberanews)-Dawladaha Somaliland iyo Soomaaliya ayaa wada hadal ku saabsan sidii isfaham looga gaadhi lahaa khilaafka ku saabsan hawada waxa ay ku yeesheen magaalada Nayrobi ee dalka Kenya.
Maareeyaha hay’adda duulista iyo madaarada Somaliland Duuliye Cabdi Maxamed Rodol iyo wasiirka duulista Soomaaliya Maxamed Cabdillaahi Salaad ayaa bishan waxa ay kulan ku yeesheen magaalada Nayrobi, iyagoo kala hoggaaminaya laba wefti oo tirsan hay’adda duulista Somaliland iyo wasaaradda duulista ee Soomaaliya. Kulankan ay isugu yimaadeen Somaliland iyo Soomaaliya, waxa qayb ka ahaa oo goob-joog ahaa ergayga Qaramada Midoobay u qaabilsan Somaliland iyo Soomaaliya danjire Michael Keating iyo xarunta caalamiga ah ee wada hadalada dunida ee Centre for humanitarian dialogue (CHD), xafiiskeeda Nayrioobi.
Sida uu warku sheegay labada dhinac ayaa ka wada hadlay go’aankii ay hadda ICAO dawladda Soomaaliya ugu gacan gelisay maamulka hawada ee Somaliland iyo Soomaaliya, taas oo ay Somaliland si adag ugu gacan saydhay una cambaaraysay. Labada wefti ee Somaliland iyo Soomaaliya ayaa magacaabay guddi khubaro ah oo ku kulmi doona dhawaan magaalada Nayrobi kuwaas oo ka shaqayn doona sida heshiis looga gaadhi doono khilaafka hawada. Labada guddi ayaa soo diyaarin doona sida loo wadaagi karo masuuliyada iyo dakhiliga hawada looguma maamuli karo si wada jir ah oo heshiis lagu yahay, waxaanay isugu iman doonaan kulan labaad.
Waar markii u horaysay ee ay is horfadhiistaan wufuud ka kala socota Somaliland iyo Soomaaliya, ka dib markii ay Somaliland hakisay wada hadal qorshaysnaa inuu Djibouti ku dhex maro Madaxweyne Biixi iyo Madaxweyne Farmaajo, ka dib markii ay dawladda Soomaaliya weerar diblomaasiyadeed kaga jawaabtay heshiis saddex geesood ah oo ku saabsan dekedda Berbera oo dhex maray Somaliland, Imaaraadka Carabta iyo Itoobiya. Madaxweynayaasha Somaliland iyo Soomaaliya Muuse Biixi Cabdi iyo Maxamed Cabdilaahi Farmaajo ayaa u muuqda ama la aaminsanyahay inay la socdeen kulanka dhex maray wasiiradan.
Previous articleMaxkammad ku taal Turkiga oo xabsi daa’in ku riday 104 qof oo ka tirsanaa Ciidammada
Next articleXaaladda wararkii u dambeeyay ee khasaaraha roobab ka da’ay Awdal iyo Selel